यो सत्य हो कि त्यहाँ माथि अक्सिजन कम छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
यो सत्य हो कि त्यहाँ माथि अक्सिजन कम छ?
क्लौडी क्यासलहरू | | Divulgation
तपाईं आफैले ती अनुभव लिने अवसर पाइसकेका व्यक्तिहरूको लागि, पहाड चढ्दा तपाईं कति पटक सास फेर्नुभयो? त्यो ... "म सास फेर्न छोटो छु।" लोकप्रिय रूपमा भनिन्छ, उचाई बिरामी वा soroche। यो त्यस्तो शारीरिक असुविधा हो जुन आफैलाई टाउको दुखाइ, कमजोरी वा मतलीको साथ प्रकट गर्न सक्छ। यो माथि जाँदा प्राय: लोकप्रिय अक्सिजन हराएको कारण हो।
ठिक छैन, न त यो हराइरहेको छ न यो अधिक हो। अक्सिजन उही नै रहन्छ, त्यहाँ सधैं २१% हुन्छ चाहे हामी तल जान्छौं वा माथि।। तर ... पर्वतारोहीहरू र आरोहीहरू जसले सगरमाथाजस्ता उत्कृष्ट चुचुराहरूमा चढाउँदछन् ... के उनीहरूले अक्सिजन बोतलहरू बोक्दैनन्? हो यो छ। यस समयमा तपाईको दिमागमा गडबड हुन सक्छ। मुख्य कारक अक्सीजन होइन तर हो, हावाको मात्रा हामीसँग छ। वायुमंडलीय दबाव.
वायुमण्डलीय चापले हावाको अभावलाई कसरी प्रभाव पार्दछ?
त्यहाँ कम दबाव छ रूपमा, हाम्रो फोक्सोलाई अधिक मेहनत गर्न आवश्यक गर्दछ श्वासनली को माध्यम बाट हावा आकर्षित गर्न। र यसको साथ, अक्सिजन।
एक राम्रो उदाहरण को रूप मा, हामी लिन सक्छौं सगरमाथा। यसको लगभग ,9.000, ००० मिटर अग्लो संग, शीर्षमा यसको वातावरणीय दबाव ०. 0,33 छ समुद्री सतहमा १को तुलनामा। त्यो दबाबको साथ, यो हावा मात्र हो जो फोक्सो भित्र पस्छ, र यो एक धेरै ठूलो ओभरएक्सर्शन लिन्छ अवशोषित गर्न। रक्तवाहिनीमा सार्नको लागि एल्भियोलीले विरलै अक्सिजन लिन सक्दछ। यो ठ्याक्कै त्यहाँ छ, जहाँ यो अभाव छ, सबै शारीरिक रोगहरूको कारण। सब भन्दा गम्भीर मामिलाहरूमा, पल्मोनरी एडेमा र मायोकार्डियल इन्फार्क्सन।
यो सही कल्पना गर्न गाह्रो छ? हावा अझै हावामा छ र धेरै हल्का पनि नहुन सक्छ। अर्को समानता। हावाले भरिएको साइकलको पा wheel्गलाई कल्पना गर्नुहोस्। तपाईंले "यसलाई धेरै बढाउनु" पर्छ, यसलाई राख्नु पर्छ बढी दबाब, त्यो छ, अधिक हावा। यति धेरै हावाको चापको साथ, त्यहाँ अधिक अक्सिजन हुनेछ, ठीक छ, त्यस खण्डमा? साथै, यदि हामीले हाम्रो मुख खोलेका छौं (यसलाई नहेर्नुहोस्!) प्वालमा, यो एक्लै भित्र छिर्दछ यसलाई लगभग सुंघ्न बिना।
जब तपाईं आफैंलाई यी परिस्थितिहरूमा फेला पार्नुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा छ। यो होइन कि अक्सीजनको अभाव छ र तल्लो रहन, त्यो हो कि तपाईं बढी शोषण गर्न सक्नुहुन्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » यो सत्य हो कि त्यहाँ माथि अक्सिजन कम छ?
मलाई यो मन पर्थ्यो, तपाईको व्याख्याको लागि धेरै धन्यबाद, म आफैलाई लामो समयदेखि सोधिरहेछु र वास्तवमा अन्य पृष्ठहरूले मूर्खता जवाफ दिन्छ। धन्यवाद! Ature प्रकृति अद्भुत छ: 3
Zayra लाई जवाफ दिनुहोस्
दक्षिणपूर्वी स्पेनमा मरुभूमि आउने बर्षहरूमा अझ खराब हुन सक्छ
कार्दशोभ स्केल। सभ्यताको प्राविधिक विकासको स्तर